Ukubaluleka kokuba nguErnesto, uMsebenzi wobugcisa ka-Oscar Wilde | Uncwadi lwangoku
Ukubaluleka kokubizwa ngokuba yi-Ernesto
UJuan Ortiz | | Ababhali, Iincwadi, Ithiyetha, Ezahlukeneyo
Ukubaluleka kokubizwa ngokuba yi-Ernesto.
Ukubaluleka kokubizwa ngokuba yi-Ernesto Yayingumdlalo wokugqibela ohlekisayo owenziwe yimbongi yokuzalwa yaseIreland, umbhali kunye nombhali wemidlalo, uOscar Wilde. Kugqityiwe ngo-1895, kuthathwa njengobugcisa bokwenene. Ukuqanjwa kwayo kwakungoFebruwari 14 kwakuloo nyaka, eSt. James Theatre eLondon.
Kwiinyanga ezintathu emva kwenkulumbuso, uWilde wafakwa entolongweni emva kokumangalela utata wesithandwa sakhe esiyindoda, u-Alfred Douglas, ukunyelisa ngokumbiza ngokuba "sodomite." Kodwa ubungqina obuchasene naye babungummangaliso kwaye umbhali wagwetywa iminyaka emibini esebenza ngokunyanzelwa. Emva kokukhululwa kwakhe entolongweni, uWilde waya eFrance, apho wafela khona kwimeko yokugxothwa.
1 Iprofayile yomntu
2 Ukubaluleka kokubizwa ngokuba yi-Ernesto
2.1 Olunye uguqulelo olusemthethweni lwesihloko
2.2 Comedy Banal kubantu kakhulu kakhulu
2.3 U-Ernesto kunye no-Algernon
2.5 Uthando kunye nokunyaniseka kwalo ...
2.6 Imfihlo kaMiss Prism
2.7 Isiphumo esingalindelekanga
U-Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde Wayevela eIreland. Wazalelwa eDublin ngo-Oktobha 16, 1854. Abazali bakhe yayinguWilliam noJane Wilde, bobabini babeziingcungcu ngelo xesha. Namhlanje, uthathwa njengomnye wababhali abadumileyo benkulungwane ye-XNUMX, ngexesha lokugqibela kweVictorian eLondon.
Wayemi ngobukrelekrele bakhe. Ukukhululeka kwakhe kokuziqhelanisa neemeko kwamvumela ukuba abe ngumntu odumileyo phakathi kwezona zihlalo ziphakamileyo esixekweni. Nangona wakhula njengonobuhle, ekugqibeleni waguqukela kubuKatolika ngokuzithandela. Ngokutsho kwakhe, i-hedonism immisele ubomi. Oku wakwazisa kwileta awayibhalayo -UDe Profundis-.
Eli yelenqe likumfana ogama linguJack Worthing kunye nobudlelwane obungemanga nomntakwabo (wasentsomini) u-Ernesto. Lo msebenzi usebenzisa uyolo lwentsingiselo ephindwe kabini yesigama sesiNgesi ukuhlekisa eluntwini. Kubaqalayo, isihloko ngesiNgesi-Ukubaluleka kokufumana inkxaso- sele ihlekisa yedwa. Kutheni elula? Igama elithi "Earnest" libhekisa kwigama likaErnesto kunye negama elibi.
Ngoko ke, Ukubaluleka kokuthatha nzulu isenokuba yinguqulelo esebenzayo ngokulinganayo. Kwelinye icala, ngesiNgesi igama elithi "Ernest" livakala ngokufanayo neli gama ngokunyanisekileyo, oko kuthetha ukuba kunengqiqo. Ke ngoko, kuthathelwa ingqalelo ngokwembono yokunyaniseka nokuthetha phandle.
Olunye uguqulelo olusemthethweni lwesihloko
Uhlobo oluqhelekileyo lokuguqulela olusetyenziselwa ukugcina i-pun yoqobo kukutshintsha igama lomntu ophambili. Umzekelo: Ukubaluleka kokuba nzima (Inokunyaniseka okanye inyani). KwiCatalan, njengenyaniso enomdla, batshintshe igama likaErnesto laba ngu "Frank". Ngale nto, yaba ligama elithi "franc" (frank).
Comedy Banal kubantu kakhulu kakhulu
UJack Worthing ngumfana osemncinci ongazi ngembali yakhe. Abazali bakhe abamamkelayo bamfaka kwisutikheyisi - belahliwe - xa wayeselusana. Ukusuka kubo wazuza njengendlu yelizwe apho angumgcini weenkedama uCecily Cardew. Ukubaleka ubunzulu balo msebenzi, uJack wafaka umzalwana ophambeneyo ogama linguErnesto (Umhlali waseLondon).
EKe, kwaye njengesizathu esigqibeleleyo, uJack "unyanzelekile" ukuba ahambe ngeveki. Oku ngomdla ofunekayo wokunceda umntakwabo "kubalandeli" bakhe. Ukuthintela ukuhleba ngobomi buka-Ernesto ekungcoleni igama likaJack, uthatha ukuba ungubani u-Ernesto kumhlaba waseLondon. UJack no-Ernesto ngabantu abafanayo, kodwa banobuntu obahluke okwehlukeneyo- kunye nobomi-.
U-Ernesto kunye no-Algernon
UJack yindoda eneentloni, eqinile kwaye yoyika uThixo. Endaweni yokuba u-Ernesto yindoda enomtsalane, efuna ukonwabela ubomi. Umhlobo wakhe osenyongweni (nolona tshaba lubi ngaxeshanye) nguAlgernon "Algy" Moncrieff. Naye unozala kunye noJack, ogama linguErnesto, owathandanayo. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ufunge ukutshata kwaye ugqiba kwelokuba axelele uAlgy yonke inyani.
Xa uJack ecacisa imicimbi eMoncrieff, le yokugqibela ithatha ithuba lokuveza ubukho bomhlobo wobuxoki ogama linguBunbury. Imalunga nendoda elihlwempu, egula kakhulu ehlala ezilalini. Apho, u-Algy uyabaleka xa efuna ukubaleka isidlo sangokuhlwa esibuhlungu nomakazi wakhe kunye nomzala wakhe (athandana naye uJack).
Indoda ethandabuzayo ibiza lo msebenzi ngokuba yi "Bunburear." Ukwengeza, ubukho beBunbury bangela uJack kwisigqibo sokubuyela ebaleni, abulale umzalwana wasentsomini kwaye athabathe igama. Nangona kunjalo, akufika ekhaya-emva kokuthetha no-Cecily's governess kunye noMfundisi-ngeendaba zokufa kwakhe, ufunda ukuba u-Algy ngoku ngu-Ernesto Worthing.
U-Oscar Wilde ucaphula.
Uthando kunye nokunyaniseka kwalo ...
Ngelixa uJack omncinci esegumbini, IAlgernon Moncrieff ikunye noCecily omncinci. Wazazisa njengomntakwabo u-Ernesto, emva koko wabhengeza ukuba uyamthanda uCecily kwaye inkedama iyamamkela. Ngokwenyani, ukusukela oko wafumanisa malunga nobukho babo eLondon, babenobudlelwane obumnandi.
Iileta, iintyatyambo, ukuzinikezela, ukulwa kunye noxolelwaniso, yonke into eyimfuneko ukubonisa ubukho bobudlelwane bokwenyani (?). Isithandwa samkela yonke imiba kwaye siyaxolisa ngeziphoso ezenziweyo ngokungazi kwakhe. Okwangoku, u-Algernon ugqiba kwelokuba azibhaptize ngegama u-Ernesto.
Imfihlo kaMiss Prism
Ukuhlekisa kufikelela kwelona nqaku liphambili xa abathandi be-Ernestos bobuxoki bedibana ... bekukho uthando, inzondo kunye nobuzalwana kwimizuzu nje embalwa. Inyaniso iyaphuma, uAlgernon Moncrieff noJack Worthing bathatha amagama abo okwenyani, ubuncinci okwexeshana. Kusembindini wale ngxaki apho ekugqibeleni kufunyanwa ibali lokwenyani likaJack.
Isutikheyisi eyashiywa nguJack yavela ukuba yeyombuso kaCecily, uMiss Prism. Ngubani, xa waphulukana naye (nomntwana ngaphakathi) wayesebenzela utata ka-Algernon. Usana lwalubhaptiziwe njengoErnesto Moncrieff, umntakwabo Algernon Moncrieff, owaziwa njengoJack Worthing.
Umsebenzi wahlulwe kathathu okanye kwezine (ngokwompapashi); kodwa ngaphandle kwenani lezenzo, ibonisa ubuchule bombhali. Iziqendu zayo ezimbini zokugqibela kukuvalwa ngokugqibeleleyo kwemeko (kunye noluntu). Xa ecacisa ngemvelaphi yakhe, u-Ernesto uyaxolisa kwisithandwa sakhe ngokuphila ubomi obungenaxoki engazi, uyamxolela ngokubuza "ukuba ingaphindwa."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukubaluleka kokubizwa ngokuba yi-Ernesto
U-Leon Arsenal. Udliwanondlebe nombhali weBlack Flag
Yintoni inoveli yembali?